यस्तो पितुर्के मान्छेलाई जीउको मासु काट्ने वा छाला ताछ्ने कुरा सुन्दा के भयो होला! मेरो त डरले जीउभरि काँडा उम्रेका थिए, जब मैले पाटन, सुबहाल (सौबहाल) को एउटा मन्दिरमा मान्छेको मासु चढाएर पूजा गरिन्छ भन्ने थाहा पाएँ।
धेरैलाई यस्तो परम्पराबारे सुनेरै अचम्म लाग्यो होला! यस्तो पनि पूजा हुन्छ कहीँ! हुँदो रहेछ, भइरहेकै छ।
आज म तपाईंहरूलाई यही पूजाविधि र यसको कथा सुनाउँदैछु। धेरैलाई त सुबहाल कहाँ पर्छ भन्ने नै थाहा नहोला। काठमाडौं उपत्यकामा मूलसडकबाट भित्र गल्ली-चोकहरू चहार्दा यस्ता अनेकौं बहाल भेटिन्छन्, जहाँ प्रायः मान्छे बिरलै पुगेका हुन्छन्। सुबहाल त्यसैमध्ये एक हो। म तपाईंहरूलाई त्यही ठाउँ लैजान्छु है त।
यहाँ टाउको निहराउनुपर्ला है, ढोका होचो छ। भित्र आँखैअगाडि देखिन्छ महाविहार, जसको छत भुइँचालोमा भत्किएर बनेकै छैन। जस्ताले छोपछाप पारिएको छ। विहारकै छेउमा दक्षिण फर्केको छ, महांकाल मन्दिर।
‘ओहो निकै दुख्छ होला हगि?’ मैले तर्सिंदै सोधेँ। उनले हाँस्दै जवाफ दिए, ‘चौटा–चौटा मासु चट्टचट्ट काट्ने कहाँ हो र! अलिकति छाला काटेर चढाउने हो।’
बडा दशैंको महिमा : टिका, जमरा, दक्षिणा र आशिर्वादको के छ महत्व ?